Mayelana NATHI | Lingshou Huajing Mica Co., Ltd.
Uyemukelwa ku-Huajing Mica
ILingshou Huajing Mica Co., Ltd., esungulwe ngonyaka we-1994, inomlando weminyaka engama-27 kuze kube manje. Kuyibhizinisi elenzelwe ukukhiqiza ikakhulukazi ekucutshungulweni okuningiliziwe kwensimbi engahlanganisi okubandakanya i-mica yemvelo, i-mica yokwenziwa, amaminerali asebenzayo njll.I-Huajing inikeza izixazululo zomhlaba wonke ngokuya ngobuchwepheshe obusebenzayo bamaminerali, izinhlelo zokusebenza eziphezulu, phakathi kwazo lapho ukukhiqizwa kwe-mica kuhlanganisa khona uchungechunge lonke lwekilasi le-powder. Le nkampani ibeke isikhungo sokucwaninga nokuthuthuka emikhakheni ehlukene, okuzohlinzeka ngokusekelwa okuqinile kwezobuchwepheshe kukho konke ukukhiqizwa kwezimboni nezinto zokwenziwa kwezimonyo. Ngemuva kweminyaka engaphezu kwengu-20 yentuthuko eqhubekayo kanye nezinto ezintsha, i-Huajing inikezwe "i-National High-tech Enterprise", "Isifundazwe Esisha se-Hebei Special Enterprise" nezinye iziqu ezihlobene nokuhlonishwa. IHuajing inamathela emgwaqeni wamasu amasha nentuthuko, ithobela ukuhwebelana kwamazwe omhlaba ngohlobo lwayo kanye nokubekwa emigomeni kwemikhiqizo yayo. Izibophezele ekwakheni "inkampani esebenza ngezinto zobuchwepheshe obuphezulu futhi enenzuzo", ngezinto zokwakha ezisezingeni eliphezulu njengezimbangela zokukhula komnotho waseChina kanye nomhlaba.
ILingshou Huajing Mica Co., Ltd., esungulwe ngo-1994.
ILingshou Huajing Mica inomlando weminyaka engama-27 kuze kube manje.
Iminyaka engaphezu kwengu-20 yentuthuko eqhubekayo kanye emisha.
IHuajing inethimba eliqeqeshiwe elinamalungu acishe abe yikhulu, azibophezele ekukhiqizeni nasekukhiqizeni imikhiqizo esezingeni eliphakeme ku-mica neminye imikhiqizo yezimbiwa. Lezi zinto zisebenza kahle kakhulu ngamaminerali, ikakhulukazi afaka izimonyo ezisezingeni eliphezulu, amaplastiki wobunjiniyela, upende olwa nokugqwala, umhlobiso wokuvikelwa kwemvelo, nezinto zokushisela ezikhethekile, ziwine indawo ehamba phambili yeHuajing emkhakheni wesicelo. Le nkampani inamathela isu lokuthuthukisa elisezingeni eliphakeme futhi ithatha izinto ezintsha zesayensi nezobuchwepheshe njengokuncintisana okuyisisekelo. Ikakhulukazi eminyakeni yamuva nje, inezinzuzo eziholayo zobuchwepheshe kanye nesipiliyoni esicebile ekukhiqizeni i-mica yokwenziwa, ukusetshenziswa kwamaminerali asebenzayo, ukululama okuphelele nokusetshenziswa kwezinsizakusebenza ezisezingeni eliphansi nezinye izinto ezihlobene.
IHuajing inamathela kumqondo wohlelo lokuphatha oluthuthukile. Ukuphathwa kwayo kwemboni kuye kwahambisana ne-ISO9001: 2015 uhlelo lokuphathwa kwekhwalithi, i-ISO14001: 2015 uhlelo lokuphathwa kwemvelo kanye ne-OHSA18001: 2007 uhlelo lokuphathwa kwezempilo nokuphepha emsebenzini. Ngenxa yokuthuthuka okungaguquguquki kwamazinga ayo okuphatha nokukhiqiza, i-Huajing inamakhasimende acishe abe ngu-400 emhlabeni wonke, njengamabhizinisi asekhaya aziwayo iKingfa Scince & Technology, i-Oakley New Materials, kanye namabhizinisi aziwayo omhlaba jikelele njenge-Basf yaseJalimane, i-Japanese Mitsubishi Chemical, i-Nippon Paint, i-LG yase-Korea, i-Hyundai, ne-American Dow chemical, njll. Zonke izinhlangano ezishiwo zisungule ubudlelwane besikhathi eside, obuzinzile bokusebenzisana nenkampani yethu.
Ngobungcweti, ukwethembeka, inhlonipho, nokuqamba izinto njengesivumo sokholo salo, iHuajing Mica ibheke phambili ekwakheni ikusasa elingcono nawe ngombono wokuthuthuka njalo nokwanelisa inani lemikhiqizo yamakhasimende.